Global Voices teny Malagasy » Loharanom-Baovao 10 Ilain’ireo Mpikatroka Miteny Arabo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jona 2014 21:14 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Morris Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Namoaka vaovao sasantsany mikasika ny Tasharuk izahay raha iverenana ny tamin'ny volana Febroary, izay tahiry fakana loharanom-baovao avy amin'ny SMEX . Nanomboka teo, nampitomboin'izy ireo ny loharanom-baovao amin'ny teny Anglisy sy amin'ny teny Arabo. Indreto loharanom-baovao 10 amin'ny teny Arabo izay mety hanampy ireo mpikatroka hanatrarana ny tanjon'izy ireo. 
1. Taridalana amin'ny Tolona tsy Mahery setra Mahomby amin'ny teny Anglisy,  Arabo  ary Farsi  – navoakan'ny Canvasopedia .
2. Taridalana amin'ny Famokarana Media Am-pilaminana sy Voaaro amin'ny teny Anglisy  ay Arabo  – navoakan'ny Small World News . Manana loharanom-baovao sasany ihany koa izy ireo ao amin'ny finday SAT. 
3. Rindrambaiko malalaka sy Fanovozam-Pilozofia Misokatra hoan'ny rehetra amin'ny teny Arabo  – navoakan'ny SourceForge
5. Taridalana amin'ny Fifandraisana Ara-Stratejika eo amin'ny Fikambanan'ny Firaisamonim-pirenena amin'ny teny Anglisy  sy Arabo  avy amin'ny Fandaharanasan'ny Firaisamonim-pirenena ao Jordania ao amin'ny USAID’ .
6. Ireo Fototry ny Fandraketana am-peo amin'ny teny Arabo  avy amin'ny SMEX The Basics of Audio Recording in Arabic  by SMEX 
7. Bokikely Fampiofanana hoan'ny Olo-tsotra Mpanoratra Gazety amin'ny teny Arabo  avy amin'ny Foiben'ny Firaisamonim-pirenena sy ny Demaokrasia ao Syria 
8. Inona no atao hoe Creative Commons License, ary Ahoana Ny fomba Ampiasanao izany? amin'ny teny Arabo , lahatsary novokarin'ny WeZank 
9. Ahoana no fampiasana Twitter Hisian'ny Fanovana Ara-tsosialy amin'ny teny Arabo , lahatsary avy amin'ny NewMediaKSU. 
10. Fitsipika Iraisam-pirenena momba ny Fampiharana ny Zon'olombelona Eo Amin'ny Sehatry ny Fanarahamaso ny Fifandraisana amin'ny teny Anglisy , Arabo , sy ny sisa maro hafa. Tahirin-kevitra manazava ny fomba fampiharana ny zo iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona eo amin'ny tontolon'ny nomerika amin'izao fotoana.
Tombony: Araho hatrany ny vaovao mikasika ny Bokikely fampiasa amin'ny Tahiry Misokatra (Open Data Handbook), torolalana amin'ny endrika araka ny lalàna, ara-tsosialy sy ara-teknika momba ny tahiry misokatra. Amin'ny teny Anglisy  sy ny dikanteny an-dalampanaovana amin'ny teny Arabo amin'ny alalan'ny Transifex .
Sary: The Day We Fight Back Banner (r,  avy amin'i Alex Perkins (CC-BY 4.0)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/06/05/60415/
 Namoaka vaovao sasantsany : https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2014/02/10/arabic-language-resources-for-social-media-activists/
 Tasharuk : http://tasharuk.net/en/
 finday SAT.: http://smallworldnews.tv/guide/
 Fandaharanasan'ny Firaisamonim-pirenena ao Jordania ao amin'ny : http://www.csp-jordan.org/en/
 SMEX : http://www.smex.org
 Foiben'ny Firaisamonim-pirenena sy ny Demaokrasia ao Syria: http://ccsdsyria.org/
 The Day We Fight Back Banner (r,: http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_%C3%9Cberwachungs-_und_Spionageaff%C3%A4re#mediaviewer/Datei:The_Day_We_Fight_Back_-_banner.jpg